MM Abiyyi eebba warshaa daabboo Shaggar irratti hasaa taasisen: – Kichuu
HomeAfaan OromooTVMM Abiyyi eebba warshaa daabboo Shaggar irratti hasaa taasisen:
BB$: ODUU WAX. 25/2020BBS: Bultum Broadcasting Services
MM Abiyyi eebba warshaa daabboo Shaggar irratti hasaa taasisen “namni hundi xinxalaa seenaa ta’uu hindanda’u. Qo’annaa seenaa hayyootaaf dhiifnee waan nu fuldura jiru irratti haxiyyeeffannu” jedheera. Ergaa kanaan kan inni xuquu barbaade Haacaaluu dha. Tibba kana Haacaaluun Minilik qeequun isaa leellistoota sirna moototaa bira waca guddaa uume. Abiyyis itti gaddeera fakkaata.
Abiyyi nama dhiba. Waraanni mootummaa ilmi keessan WBOti makame jedhee hadhaf abbaa yeroo ajjeesu gadi bahee waa takka hin dubbanne, mana hadhoolii fi maanguddoota Oromoo irratti yeroo gubbanii jigsan waa takka hin dubbane, waa’ee abaa ijoollee ajeefamee waraabeessatti darbame waa takka hin dubbanne, waa’ee shamarree maatii ishii ajjeesanii ishi gudeedan faa “asoosamni Amnestii waan nuyaachisu miti” jedhe. Fakkeenya baay’ee tarreessuun ni danda’ama. Dhugaa hata’uu soba kan hin beekkamne oduun barattoonni naannoo amaaraa butaman jedhu sun illee al meeqa ibsi irratti keenname. Biyyattii kanatti dubbiin Oromoo yoom kabaja argata? Hoo xiqqaatee waa’ee vidiyoo Gujii ijaan argine san masaraa mootummaa keessa namni ibsa itti kennu akkamiti dhabama?
Walumaa gala hidhaan, reebichii fi ajjeechaan Oromiyaa keessa deemaa jiru daran hammaateera. Rakkinoonni kun hundi otoo jiran Abiyyi kan yaaddoo itti ta’e Minilik qeeqamuu isaati. Dhugaadha, nama sirnuma san deebisee Oromoo irratti fe’uu barbaadu irraa deebii eeguun gowwummaa dha. “Minilik leellistan malee jaalala biyyaa hin qabdan” ilaalcha jedhu qaba Abiyyi. Ummanni kan barbaade jaalachuu kan barbaade qeequuf mirga qaba. Yaada ofii ibsachuuf hayyuu seenaa ta’uunis ummatarraa hin eegamu. Oromoon maangudoota irraa seenaa daddabrsaatuma as gahe. Wanti kitaaba habashaa keessa hin jirre hundi kijiba jechuu miti. Seenaa irratti adda addummaan ilaalchaa biyyuma hundatti kan jiruudha. Kanan ani jaaladhe jaalattan malee ilaalchi jedhu biyya fulduratti hin tarkaanfachiisu.
Abiyyi nama karaa gabaabduu imalee milkaa’eefii nama dadhabbiin maletti bakka silaa namni abbaa ajjeessee aangoo irraa fudhachuu male inni dhiiga ilmaan oromoon badhaafame ee dhuguma #Badhaadhina jedhee maqaas jijjiirate inni ni badhaadhe
Abiyyi nama ummata ofii ajjeesaa ajjeesisiisaa tureen badii dhiqatee nagaya uffateedha nama ormaaf ergamaa tureedha nama ummanni inni hiisisaa ture isumaa deebi’ee hidhaa ormaa jalaa isa baaseedha
Namni akka #Abiyyi karaa gabaabduu deemee kasaare hin jiru
Kasaaraan guddoon karaa salphaan #Abiyyiin qunname
ummata oromootti qoosuu
Dhugaa ummata oromoo wallaaluu
Ummata oromootti qawwee gara galchuu
Garee bitaatiif jaalatamuuf ummata oromootuin jibbamuun isaa booddee erga ummata oromootiin jibbamee warra gammachiisuuf jala fiigaa tureenis jibbamaa dhufuun isaa kasaaraa kanaan isa gahe
Utuu ummata oromoo mufachiisuu baatee utuu gaafii oromoo deebiseef ta’ee #Abiyyi waca nafxanyaan akka saree itti duttu itti kolfaa laphee dhiibee jiraata ture
Maal godhuree isallee itti fakkaattee itti fakkeessanii faallaa oromoo dhaabsisanii dhaabbatee har’a kasaaraa dandamachuu hin dandeenye hammatee waliin kufee ka’utti jira
Bu’aa Badhaadhinaa keessaa tokko #Daabboodha👌🙂
OMN:ዕለታዊ ዜና (June 25 ,2020 )
Ummanni wolaayitaa yeroo ammaa kana koronaa jinnii osoo hin jedhin, haala kanaan bahee mirga ofiitiif falmataa jira